Fursadaha gaarka ah ee loo adeegsado Kaameerada-Worn Camera | Xalka OMG
Xilligii ay jirtay feejignaanta feejignaanta, kaamirooyinka nooc kasta leh waxay noqdeen isha saddexaad oo dhammaantood arkaysa oo duubaysa. Midkii ugu dambeeyay ee ku soo biira ayaa ahaa kaamirooyinka jirka, oo loogu talagalay mabda'a loo adeegsado booliiska, si loo soo qabto labadaba dabeecadda wakiillada iyo waqtiga fal dambi lagu galo. Si kastaba ha noqotee, adeegsigeedu wuxuu ku fidsan yahay qaybaha kale ee mihnadeed iyo xitaa qeybta waxbarashada. Buuqani wuxuu furayaa dood cusub oo ku saabsan xad-dhaafka ama ma aha feejignaanta iyo isbeddelka dabeecadda laxiriirta.
Waa shaki la'aan sanado guul ah oo loogu talagalay kaamirooyinka, oo dhaafsiisan qaabka loo yaqaan 'selfie stick', iyadoo ay soo kordhayaan kaamirooyinka ficil iyo GoPro oo ah kuwa ugu weyn; kuwa ilaaliya ficilada booliiska; codsiyada tooska ah ee tooska ah ee u baahisa qof walba; ama aaladaha amniga farsamada sare ee leh wajiga. Waqtiyo badan oo dheeri ah oo nolosheena ah ayaa waxaa qabtay kamarad, sidaa darteed su'aalo cusub ayaa la soo saaray oo ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay in lagu noolaado ilaalin ilaa isha saddexaad.
Gaar ahaan, kaamirooyinka jirka ama kaamirada jirka ayaa si wanaagsan loogu soo dhoweeyey magaalooyin badan, maadaama loo arko inay yihiin aalad xakamayn iyo miisaan culus oo ka dhan ah awoodda booliiska. Kuwani waa aalado aan faragalin ku lug lahayn oo ku dhegan labiska wakiilka ee joogga garabka, si ay si taxaddar leh u duubaan adigoon faragalin ku sameynaynin howlahaaga maalinlaha ah. Waxay si joogto ah u duubi karaan filimka, iyadoo ay suuragal tahay inay si toos ah fiidiyowyada ugu duubaan daruuraha.
In kasta oo kontaroolada bilaysku gacanta ku hayaan iyo hawlgallada inta badan ay dhadhamiyaan xaafadaha adag, fiidiyowgu wuxuu u yahay kaalmo qiimo leh xagga fulinta sharciga. Iyagoo ku labisan dareyska dharka xabadka, kamarado muusik oo cabirkoodu yahay muuqaalka ciyaarta ayaa hadiyado u siin doona booliiska iyo gendarmes si ay u duubaan wax qabadkooda. Darajooyinka 360 la-waafajin karo, muraayadaha balaaran ee ay ku shaqeeyaan ayaa qabsan kara goob kasta, habeen iyo maalinba, iyadoo ay bilaabanayso bileyska ka hawlgala aaladda oo ku xiran xaaladda. Dhameystirka iskuxirka saraakiishayaga, kaamirooyinkan waxay hada bixiyaan waddo kasta oo lagu caddeeyo kiisaska quudhsiga iyo in la hubiyo daacadnimada wakiiladeena inta lagu jiro baaritaanka iyo joogsiyada. Sawirada iyo dhawaqa, ee lagu duubay kaarka xusuusta, ayaa dib loogu adeegsadaa saldhigga booliiska ee CD-Roms. Kuwani dhammaantood waa caddeymo caddeymo ah oo lagu dhejin karo daqiiqadaha qeexaya xaqiiqooyinka oo ku quudin kara habraac leh faa'iidooyinka sida
Aaladda sidoo kale waxaa ku jira softiweer khaas ah oo keydiya oo xajinaya diiwaangelinta oo ka hortagaysa nooc kasta oo wax laga beddelo ama wax laga beddelayo. Hadday dhacdo tuugo ama lumis, waxaa sidoo kale la siiyaa aalad qufulitaan. Waxay u oggolaadaan duubista iftiinka hooseeya iyo xaaladaha ba'an.
Ujeeddadu way caddahay maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa qabashada labadaba dabeecadda wakiilka - oo ku habboon iyo ma aha - iyo marka dambi la galo. Si kastaba ha noqotee, aaladda noocan ah uma fiicna booliska oo keliya. Aasiya, tusaale ahaan, isticmaalkeeda dabdemiska, ilaalada amniga, ilaalada xeebaha, xakamaynta xayawaanka ama xitaa qeybta waxbarashada ayaa horeyba loo tixgaliyay, qalabaynta agaasimeyaasha iyo kaaliyaha maamulayaasha kamaradaha jirka sanad dugsiyeedka soo socda si ay u diiwaangeliyaan xiriirkooda macallimiinta iyo ardayda.
Qalabka wuxuu u oggolaanayaa habraacyada duubista waqtiga-waqtiga dhabta ah. Markiiba ayaa la keenaa, aaladda waxay bilaabaysaa in ay duubto mana u isticmaali karo sarkaalku sababta oo ah macluumaadka waxaa la soo dejinayaa oo keliya waqtiga kala-guurka uu ku dhammaado, mid ka mid ah xarumaha aruurinta, halkaas oo markay timaaddo ay lagama maarmaan tahay in la xiro oo la qoro isticmaale. in shaashadda ay kala soo bixi karaan feylasha saldhiga dhexe oo xitaa dib u fiiriyaan wixii ay ku sameeyeen meel uun, laakiin ma beddeli karaan ama tirtiri karaan.
Sidan oo kale, aaladda ayaa si joogto ah u duubaysa fiidiyowyo HD buuxa (oo ah waqtiga dhabta ah), maqalka iyo jawiga, taas oo macnaheedu yahay in xarumaha kaladuwan ee kaladuwan ay awoodi doonaan inay ogaadaan macluumaadka guud ee ku saabsan cidda sidata. Faa'iido kale ayaa ah in fiidiyaha loo isticmaalo caddeyn ahaan maxkamadda dhexdeeda.
Qalabka dhismaha ee aaladda, ayuu Generalku intaa ku daray, inay yihiin shaqo culus oo naxdin leh, maadaama loo soo saaray inay ka hortagaan duruufaha adag ee qorraxda iyo biyuhuba.
Kaamirada jirka waxaa loo isticmaali karaa cabir ahaan difaac. Markii qof kaco oo loo sheego in la duubo ama uu arko kaameerada, waxay u tarjumaysaa isbadal dhaqan, Waa qeyb dheeraad ah oo amniga ah. Sidoo kale, daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in muwaadiniintu u dhaqmaan si ka wanaagsan marka la duubo.
Fiidiyowga kamaradaha ayaa waxaa ilaaliya oo maareeya Waaxda Booliska waxayna ku kaydsan yihiin server sugan. Wixii ka baxsan qiimaha bilowga ah ee soo iibsashada qalabka waa qiimaha muddada-dheer ee keydinta xogta barnaamijka.
Gaar ahaan, xogta kamaradaha jirka ayaa muujisay hoos u dhac ku yimid cabashooyinka ka dhanka ah wakiilada, iyo sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimid adeegsiga saraakiisha. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka kaamirooyinka jirka lagu muujiyey ee dalka oo aan hadda khibradeena ku aragno waxay ahayd kororka daah furnaanta. Wax walba waa la duubeyaa oo haddii ogeysiiska dadweynaha iyo sarkaalka ay ogyihiin, qof walba si wanaagsan ayuu u dhaqmaa.
Fiidiyowga waxaa laga duubay aragtida sarkaalka wuxuuna qabtaa darajo 130. Maaddaama wakiillo kaladuwan ay goobta ka muuqdaan waxaad leedahay xaglo kala duwan.
Baadhitaannadu waxay soo jeedinayaan in adduunyo leh kaamirooyin ilaaliya oo dheeri ah, ay ahaan karto, mid raaxo badan oo aamin ah. Laakiin markii ay soo kordhayaan tikniyoolajiyadda teknolojiyada, waxaa sidoo kale jira fursado badan oo loogu talagalay adeegsiga xisaabtanka Tan waxaa lagu sii daraa mugdiga sharciga. Tani waxay abuurtay, tusaale ahaan, doodo kulul oo ku saabsan sida booliisku ay tahay inay u adeegsadaan kaamarooyinka haddii loo isticmaali karo meel kasta, ama goorta la tirtirayo duubista.
Maaddaama kuwani ay yihiin teknolojiyad soo ifbaxay, ma jiro sharci adag oo loo adeegsado, sidaa darteed waxaa nalooga soo saari karaa duubitaan joogto ah meel kasta oo aan aadno, annaga oo aan xakamaynaynin yaa arki kara sawiradaas. Si kastaba ha noqotee, xaaladdani waxay ku yeelan kartaa saameyn lama filaan ah oo ku saabsan abuuritaanka bulsho dulqaad badan. Iyo xitaa taas oo aan uga mahadcelineyno shaqada kuwa kale inbadan.
Fursadaha gaarka ah ee loo adeegsado Camera Camera-Worn Camera ahaa kii ugu dambeeyey: Diisambar 3rd, 2019 by admin
2771 Wadarta Views 15 Views Maanta